Some Tips We Should Know About Lipstick! | The World of Pinkgold
strike on October 30, 2008 at 6:50 pm said:
khin oo may on October 30, 2008 at 11:03 pm said:
မောင်လူအေး on October 31, 2008 at 3:54 am said:
တသသ…. က ဟုတ်ပါပြီ…
တမမ…. ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ မသိနော်…
strike on October 31, 2008 at 8:31 am said:
အဲ့ဒီ့ Pinkgold ရဲ့ “တစ်သသ နဲ့ တမမ” ကိုဘာမှန်းမသိ၍ “ဖလမ်း ဖလမ်း”ထအောင် စဉ်းစားသွားပါကြောင်း။
ဂျစ်တူး - gyit_tu on November 1, 2008 at 6:15 pm said:
အသက် ၄၀ ကျော်ရင် lip gloss မသုံးရတော့ဖူး ဆိုပါလား ။ ဒုက္ခပဲ ။ နှုတ်ခမ်းနီမကြိုက်တဲ့ အမအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ … နီးနေပြီ 😀
မိုးသောက် on November 2, 2008 at 11:21 pm said:
နုတ်ခမ်းနီ အကြောင်းဗဟုသုတလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ ..
***လမင်း*** on November 2, 2008 at 11:23 pm said:
နုတ်ခမ်း မဲတဲ့သူအတွက် နှုတ်ခမ်းနီ
ဆိုးချင်လျင် သို့မသုတ် နှုတ်ခမ်းနီချင်လျင်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးလာလို့ဒီမှတွေ့တာနဲ့ 
JulyDream on November 3, 2008 at 6:46 am said:
ပင့်ဂိုးလ်ရော… နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုလို့လား။ တွေ့သမျှ ပုံတွေမှာတော့ မျက်နှာပြောင်တွေပဲ များပါတယ်။
strike on November 3, 2008 at 9:18 am said:
Julydream ရယ်ပင့်ပင့်ကို ရက်စက်လိုက်တာ၊ပင့်ပင့်ဖလမ်းဖလမ်း ထတာတွေ့ချင်တယ်ပေါ့။
JulyDream on November 5, 2008 at 4:03 pm said:
ဘာလဲ ဟင်။ ဖလမ်း ဖလမ်း ထ တယ် ဆိုတာ။ တကယ်ကို နားမလည်လိုက်ဘူးဗျ။ ရှင်းပြလို့ရင် ရှင်းပြကြပါဗျာ။
Pinkgold on November 7, 2008 at 11:59 am said:
ဘန်းစကားလေးပါ ကိုဂျူလိုင်ရေ.. အရမ်းကို ပျော်ရွှင် မြူးထူးတယ်၊ ကလက်တယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စကားလုံးလေးပါ.. ငါ့အကိုနှယ် ဝေးရန်ကော..
strike on November 14, 2008 at 8:45 pm said:
သူတော်: လူကလည်း လှတာကို ဘလော့ဂ်လဲ လှရမှာပေါ့ ဟတ်ဟတ်..